Vamwe Vadzidzi Vachawana Chirongwa Chekutanga Chave Chachigamuchirwa
A "zvichida tsamba" inoshandiswa nemakoroji akawanda uye masayunivesiti. Iyo inozivisa kusarudzwa kwechikoro chepamusoro mune zvekudzivirira padziva nguva iyo tsamba yekugamuchirwa inogona kunge ichiuya munguva yemberi. Zvichida tsamba dzinopa makoroji nzira yekutanga kuunganidza vatenzi vakuru kunze kwekunge vamirire kusvikira zviyeuchidzo zvemahofisi zvisingazoitiki kunze kweMarch kana kutanga kwaApril.
Sei Makoroji Nemayunivhesiti Kutumira Zvinyorwa Zvichida?
Kana kukwidziridzwa kwekoljiji kunoratidzika sekunorwadza kusarudza uye kukwikwidzana, iwe zvechokwadi wakarurama kana iwe uri kuisa kune makoroji akawanda munyika uye masayunivhesiti . Asi kune rumwe rutivi rwemakwikwi. Zvechokwadi, vazhinji vevadzidzi vari kukwikwidzana pamwe chete kuti vawane nzvimbo dzisina kukwana muzvikoro zvepamusoro, asi izvozvi zvidzidzo zvepamusoro zviri kukwikwidzana pamwe chete kuti dziwane vadzidzi vane simba, vane tarenda. Pinda tsamba yakadaro.
Muzvizhinji, zvikoro zvehurumende zvakasarudzwa hazvirevi kuenderera mberi . Vakawanda vanozivisa kubvuma kwavo nguva dzose kubhizimisi kwevashandi vezvigamuchirwo zvekuita zvisarudzo pakupera kwaMarch kana kutanga kwaApril. Izvi zvinoreva kuti mwedzi mitatu inowanzoenda pakati pekushanda kwemazuva ekupedzisira uye kusunungurwa kwezvisarudzo. Ndiyo mwedzi mitatu panguva iyo mamwe makoroji angave achitsvaga nekushingaira vadzidzi. Kana mudzidzi achishanda mangwanani-ngwanani ekugadziriswa kwegore-munaOctober, somuenzaniso - mwedzi mishanu inogona kuenda pakati pemudzidzi anotumira chikumbiro ichocho uye kugamuchira tsamba yekugamuchirwa.
Ndiyo mwedzi mishanu apo kushamiswa kwemudzidzi kwechikoro kunogona kuderera, kunyanya kana iye ari kufambidzana nekunyadzisa uye kudzidza kubva kune imwe chikoro.
Muchidimbu, kana kojiji inoda kuwana chibereko chakasimba kubva kune avo vanofambisa mudziva, vanowanzoshandisa tsamba.
Zvichida tsamba dzinovabvumira kutaura nevadzidzi vepamusoro, kuderedza nguva yekudzidzira kwevadzidzi, kuwedzera chido chevadzidzi, uye kuita kuti zvive nyore kuti vadzidzi ivavo vadzidze.
Handina Kakaita Tsamba. Chii Zvino?
Usavhunduka - ruzhinji rwevakakumbira pajijiji inobvuma haigamuchiri tsamba. Somuenzaniso, muna 2015 Harvard University yakabudisa mazana matatu tsamba. 200 dzeyo tsamba dzakasvika kuvatambi (zvichida tsamba dziri chirongwa chakakosha chezvikoro kuunganidza avo vasina kudzidza vadzidzi vanonyanya kukoshesa mune zvepamusoro uye mumitambo). Yunivhesiti yePennsylvania yakabudisa tsamba mazana mana muna 2015. Zvine zvishoma zvisingatauriki zvidzidzo, zvinoratidza kuti kana mumwe chete pavatanhatu vakabvuma vadzidzi mune imwe nzvimbo yekumbira dzimba vakagamuchira tsamba inogona kunge yakanyorwa. Saka kana iwe wakagamuchira tsamba, iwe unofara! Chikoro ichi chakuona iwe somunhu anenge akanganisa uye anoda chaizvo kuti iwe upinde. Kana iwe usina kuwana imwe? Iwe uri muzhinji. Iwe unogona kuora mwoyo nekusawana tsamba inogona kunge yakakosha, asi mutambo wacho hauna kupera.
Tsamba Inofanirwa Kunyanya Kuti Chii?
Chikoro chega chega chinotaura mazwi avo zvichida zvakasiyana, asi dzinowanzoita kuti munhu anenge akakumbira ave munyengeri uye anotaura kana achisvika tsamba yekugamuchira mune ramangwana.
Pamwechete, unogona kutarisira chimwe chinhu chakadai: "Kukwazisa kubva kuHofisi yeAdmissions kuYunivhesiti! Ndiri kunyora kuti ndikuudzei kuti vaifambidzana neni uye ini takanga tine zvakawanda zvakaitwa sei mukati uye kunze kwekirasi. unonzwa kuti matarenda ako uye zvinangwa zvako zvakafanana neYunivhesiti yeYunivhesiti Kunyange zvazvo tisingatumire zvipo zvekugamuchirwa kusvika musi waMarch 30, taifunga kuti iwe unoda kuziva kuti iwe unofanirwa kubvumirwa .. Congratulations! "
Tsamba Inogona Kuve Yakagadziriswa Here?
Kunyange zvazvo tsamba inogona kunge isina chivimbo chokuti uchagamuchira tsamba yekugamuchirwa, yakanaka pedyo nechigadziro. Chengetedza makoro ako, usasimirirwa kana kusungwa, uye iwe unenge uchatora mashoko akanaka kubva kujiji yakakutumira iwe tsamba. Tsamba yacho pachayo haizotauri kuti inogamuchirwa kubva kune iyo inenge iri tsamba yekugamuchirwa, uye kutumira tsamba yekugamuchirwa mberi kwemazuva ekuzivisa zuva rinozoputsa mitemo yechikoro.
Asi hongu, iwe unogona kufara zvikuru kuverenga kupinda.
Ziva kuti kunyange kugamuchirwa kwepamutemo kunogona kubviswa kana magwaro ako achidonha zvakanyanya, kana iwe uchiita chimwe chinhu kuti upinde mumatambudziko.
Apo Makoroji Anotumira Tsamba Dzinogona Kuitika?
February ndiyo nguva inowanikwa nguva yakawanda yekugamuchira tsamba inogona kunge iripo, asi inogona kuuya kare kana kuti gare gare. Kana iwe ukashandisa mangwanani ekugumburwa, zvikoro zvishomanana zvichatotumira tsamba dzinenge dzisati dzavapo gore risati rasvika. Izvi zvinonyanya kuitika kana muchengeti wevatambi ari kushanda nesimba nekubvumirwa kune woo mudzidzi.
Zvii Zvikoro Zvinotumira Tsamba Dzakanaka?
Makoroji akawanda haazi kuzivisa pachena pachena maitiro avo anotenderera netsamba, saka zvakaoma kuziva kuti zvikoro zvakawanda zvichishandisa zvipi. Izvozvo zvakati, Harvard University , Yale Yunivhesiti , Yunivhesiti yePennsylvania nemamwe ose Ivy Ivy Schools anoshandisa mamwe maitiro angangodaro matsamba. Mazhinji emayunivhesiti makuru uye emakorikari makuru ehurukuro anoshandisa zvakare tsamba.
Makoroji akawanda anokwidza kubvumirwa, saka havana chidikanwi chekuda tsamba. Vachangotumira tsamba yekugamuchirwa pakarepo pavanenge vafunga kuti mudzidzi akanaka kumusangano.
Mamwe makoroji ega ega uye masayunivhesiti anoshandisa tsamba dzakawanda kupfuura masangano ehurumende, asi mashoma emasunivhesiti evanhu vakawanda seYunivhesiti yeVirginia anovashandisa.
Ottawa, guta guru reCanada
Revhura Ducts Yako yeMisodzi
Chii icho # * & Amp; + ?! Kutsvakurudza Kunowanikwa Kufambiswa Mashoko Anopika Ndiwo Mahara
Nzira Yokushandisa nayo Stencil Brush
Kushandisa Mubvunzo Mashoko Anotanga Na 'Wh' muchiChirungu
Kushandisa Similes uye Zviratidzo Kuti Uwedzere Kunyorera Kwatinoita (Chikamu 1)
November Nhamba yeChristian Inventions uye Mazuva Okuberekwa
Mamiriro ehurumende muBhizimusi Kuzvidzivirira, Kupisa, Kuchinja, nekushungurudza
Chii Chinonzi Social Insects?
4 Nzira dzekuvandudza yako Breaststroke Kick
Chinyiko Chikepe cheGungwa?
Cuál is the demarcation of green card peanut for pearls
Zvinyorwa Zvisinganzwisisiki zveTabby's Star
Mhemberero Yakaisvonaka Kwazvo uye Honors for Economists
Sei Uchinetseka neBowulf?
Zvaunotarisira Paunenge Uchishandira LDS (Mormon) Mission
Vatongi veMing Dynasty
Hondo dzeGreece neRoma